Hindisaha Dhaqanka Dhaqanka ee Gobolku wuxuu sharfayaa kala-duwanaanta muujinta iyo heerka farshaxanimo ee ay ururadani ku soo kordhiyeen gobolkeenna Minnesota muddo tobanaan sano ah.
U dabaal degaya adkeysiga iyo hal-abuurka dadka asaliga ah.
Barnaamijka Farshaxanka Ururka Guriyeynta Bulshada ee American Indian (AICHO) wuxuu sharfayaa adkeysiga dadka asaliga ah adoo xoojinaya bulshooyinka iyo udub dhexaad u noqda qiyamka dadka asaliga ah. Laga soo bilaabo 2012, AICHO waxay bixisay meel sanadka oo dhan ah Gimaajii-Mino-Bimaadizim loogu talagalay fanaaniinta asaliga ah inay soo bandhigaan oo ay iibiyaan shaqadooda. Galleries-ka waxaa u adeegsada farshaxan-yahannada, qorayaasha iyo fannaaniinta bandhigyada farshaxanka, sii deynta buugaagta iyo bandhigyada, kuwaas oo bilaash u ah bulshada. Farshaxanka iyo barnaamijyada dhaqanka ee AICHO sidoo kale waxaa ka mid ah fasalo farshaxan jaaliyadeed iyo aqoon isweydaarsiyo, nashaadaadka farshaxanka dhalinyarada, farshaxanada asaliga ah dhacdooyinka soo baxa iyo akhriska buugaagta, iyo dukaanka hadiyadeed ee ugu horeeya dadka asaliga ah.
Abuuritaanka tiyaatarka qoob-ka-ciyaarka asalka ah ee dhiirrigeliyay nolosha iyo riyada haweenka kala duwan ee adduunka.
Ananya Tance Theater (ADT) waxay abuureysaa tiyaatarka qoob-ka-ciyaarka asalka ah ee ku saabsan mawduucyada caddaaladda bulshada ee ay dhiirrigelisay nolosha iyo riyada haweenka BIPOC, haweenka, iyo dumarka adduunka oo idil. Sheekooyinka qoob-ka-ciyaarka halka halganka, guulaha iyo isbeddelka bulshooyinka caalamiga ah ee Madow iyo Brown ay qabsadaan xarunta, ADT waxay awood siisaa codadka farshaxanka, waxay u wareejisaa muuqaalka guud ee dhaqanka caadiga ah, waxay dhistaa xiriirro, waxayna bulshada ku dhiirrigelisaa sinnaan iyo qurux. ADT's Shawngrām Institute for Performance and Social Justice wuxuu ku yaalaa St. Paul.
Dhisida, taageerida, iyo kobcinta fursadaha dadka Madoow, bunni, iyo dadka asaliga ah.
Rootska asaliga ah waa farshaxan lagu daray urur iyo isbahaysiga fanaaniinta, kooxaha dhaqanka iyo la-hawlgalayaasha bulshada ee u heellan dhisidda, taageeridda iyo beerista boosaska, fursadaha iyo kheyraadka leh iyo u Dhaladka, Madow, bunni iyo dadka asaliga ah. Sannadkii 2017, xididdada asaliga ah waxay ka furteen leben iyo hoobiye agagaarka Imniza Ska (Bariga Side ee Saint Paul) oo udub dhexaad u ah saldhigna u leh maadooyin badan, dhaqamo kala duwan, farshaxanno dhaqamo badan iyo dhaqdhaqaaq.
Taageerida horumarinta fanaaniinta da'da yar ee reer magaalka ah iyada oo loo marayo ganacsiyo badan.
Farshaxanada isboortiga (JXTA), oo la aasaasay 1995, waa xarun shaqo abuur dhalinyaro iyo ganacsi bulsheed horumarinta bulshada oo ku qotonta Waqooyiga Minneapolis. Barnaamijyada JXTA waxay dhalinyarada siiyaan tababar heer kuliyadeed ah iyada oo loo marayo barnaamij asaasi ah oo loo yaqaan JXTALabs, oo sanadkiiba ka shaqeeya 70 dhalinyaro ah oo da'doodu tahay 14 ilaa 21 shan ka mid ah shan farshaxan oo dakhli ku soo gala iyo nashqadeynta ganacsiyada yar yar. JXTALabsku waxay bixiyaan adeegyo farshaxan oo tayo sare leh iyo adeegyo naqshadeyn ah macaamiisha maxalliga ah iyo kuwa gobollada iyada oo la horumarinayo hibooyinka hal-abuurka dhallinyarada.
Dhiirrigelinta muujinta casriga ah ee farshaxanleyda Carabta, Koonfur-galbeed Aasiya, iyo Waqooyiga Afrika.
Mizna waa barxad muhiim u ah suugaanta casriga ah, filimka, farshaxanka iyo soosaarka dhaqanka ee udub dhexaad u ah shaqada fanaaniinta carabta iyo koonfur-galbeed Aasiya iyo Waqooyiga Afrika. In ka badan 20 sano, Mizna waxay abuureysay goob dhaqameed la qurxiyay si ay uga tarjumeyso ballaadhinta bulshadeena iyo kobcinta isdhaafsiga, baaro fikradaha iyo ka qeybgal dhageystayaasha farshaxan macno leh. Mizna's waxay daabacdaa joornaalka suugaanta iyo fanka ee Koonfur-galbeed Aasiya iyo Waqooyiga Afrika ee keliya; waxay soo saartaa Bandhigga Filimmada Carabta ee Mataanaha ah; oo waxay bixisaa fasalo, aqrin, bandhigyo, farshaxanka dadweynaha iyo dhacdooyinka bulshada, oo ay kasoo muuqdeen in ka badan 400 qoraayaal maxalli iyo caalami ah, filim sameeyayaal iyo farshaxanno.
Iftiiminta xaaladda aadanaha, u dabbaaldegidda kala duwanaanshaha, iyo dhiirrigelinta xuquuqda aadanaha iyada oo loo marayo masraxyo kala duwan oo edbin ah.
Pangea World Theater wuxuu iftiimiyaa xaaladda aadanaha, wuxuu u dabaaldegaa kala duwanaanta dhaqanka, wuxuuna kobciyaa xuquuqda aadanaha isagoo abuuraya oo soo bandhigaya tiyaatarro caalami ah oo kala duwan. Waxaa la aasaasay 1995, bandhigyada masraxa ee Pangea iyo kaqeybgalka bulshada ee farshaxanka ku saleysan ayaa ka gudbaya xuduudaha waxayna isu keeneysaa dhagaystayaasha isgoyska siyaasada, farshaxanka iyo xuquuqda aadanaha si ay u sahamiyaan mowduucyada la xiriira iyo inta badan kala qaybsanaanta waqtigeenna - cunsuriyadda, qaxa, soogalootiga, xorriyadda, iyo muujinta dhaqamada kala geddisan.
Matxafka Soomaaliyeed ee Minnesota
Daryeelka dhaqanka iyo farshaxanka Soomaaliyeed iyo dhiirrigelinta fanaaniinta Soomaaliyeed iyada oo loo marayo ururinta iyo booska aan lala tartami karin.
Matxafka Soomaaliyeed ee Minnesota waa madxafka kaliya ee Waqooyiga Ameerika u heelan ilaalinta dhaqanka iyo farshaxanka Soomaaliyeed. Ujeedka matxafka ayaa ah in dhalinyarada Soomaaliyeed laga wacyi galiyo dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida iyo in buundooyin loo maro dhaqan ahaan dadka reer Minnesota ee aan Soomaalida aheyn. Matxafka waxaa laga helaa farshaxanno dhaqameedyo fara badan oo aan la kala soocin, wuxuuna u yahay goob kulan u gaar ah fanaaniinta Soomaaliyeed. Ka dib markii dagaal sokeeye ka hadhay ku dhowaad dhammaan matxafyadii Soomaaliya oo la burburiyey iyo waxyaabihii hidaha iyo dhaqanka u baahsanaa ee ku baahsan adduunka, ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis waxay isu soo baxeen si ay Minneapolis uga dhigaan guriga dhaxalka dhaqan ee Soomaaliyeed ee qaaliga ah.
Ka soo saarista riwaayado waaweyn oo ka dhashay farshaxanka, sinnaanta, iyo caddaaladda laga soo bilaabo wadnaha waayo-aragnimada Aasiya Ameerika.
Masraxa Mu waxaa la aasaasay sanadkii 1992 si codadka Aasiya Ameerika loo gaarsiiyo marxaladaha Minnesota wuxuuna ku koray inuu noqdo mid ka mid ah ururada ugu waaweyn ee soo bandhiga farshaxanka Aasiya Ameerika. Iyadoo la soosaarayo waxqabadyo waaweyn, dadaallada wacyigelinta bulshada, iyo barnaamijyada hufan ee ka dhashay farshaxanka, sinaanta, iyo caddaaladda bulshada kana soo jeeda wadnaha Aasiyaanka Ameerika, Tiyaatarka Mu wuxuu siiyaa guri aan la qiyaasi karin farshaxanada maxalliga ah iyo kuwa maxalliga ah ee Aasiyaanka Mareykanka ah iyo dhagaystayaasha dhammaan asal ahaan.
Kobcinta akhris-qorista, hoggaaminta, iyo caddaaladda bulshada iyada oo loo marayo barashada iyo adeegsiga Ereyada Hadalka iyo dhaqanka Hip Hop.
TruArtSpeaks waa urur faneed iyo dhaqan oo la aas aasay sanadkii 2006 kuna saleysan magaalada Saint Paul. Hadafkeedu waa kobcinta akhris-qorista, hoggaaminta iyo caddaaladda bulshada iyada oo loo marayo barashada iyo adeegsiga Erayga lagu hadlo iyo dhaqanka Hip Hop. Ururku wuxuu aaminsan yahay in farshaxanka iyo dhaqanka - gaar ahaan Hip Hop - ay dhiirrigeliso isku xirnaanta, koritaanka iyo isbeddelka bulshada. TruArtSpeaks waxay siisaa fursado horumarineed dhalinyarada, farshaxanada soo-baxa iyo hoggaamiyeyaasha farshaxanka iyada oo loo marayo munaasabadaha dadweynaha, la-talin toos ah, aqoon isweydaarsiyo, degganaansho, shirar, dadaallada gobolka oo dhan iyo inbadan.
Walker | Galbeed
Bixinta waxbarasho muusig oo gaar ah, oo la awoodi karo oo ku xidhnayd dhaqanka Afrikaanka Ameerika.
Walker | West Music Academy waxaa aasaasay in ka badan 30 sano ka hor muusikiistayaasha Afrikaanka Mareykanka Rev. Carl Walker iyo Grant West si ay u siiyaan meel ku qotoma dhaqammada dhaqameed ee lagu soo barbaaray — halkaas oo qof walba uu ku soo ururin karo, ku kori karo, kuna baari karo muusikada. Walker | West waxay siisaa barashada muusigga iyo barnaamijyada bulshada ee ardayda ama da 'kasta, laga bilaabo dhallaanka ilaa waayeelka, waxayna u heellan tahay mustaqbal ay qof walba ka heli karto awoodda bogsiinta muusikada.
Madowga, Asaliga, Latinx, iyo Aasiyaanka ururada farshaxanka ee ay hogaamiyaan Ameerika ayaa bulshadayada ka dhigaya meelaha ugu wanaagsan ee lagu noolaado. Waxaan u baahanahay inaan maalgashi ku sameyno ururadan muhiimka ah iyo hogaamiyayaashooda markay la kulmayaan waqtigan mala-awaalka, adkeysiga, iyo hal abuurka. —DEANNA CUMMINGS, AGAASIMAHA BARNAAMIJKA FARSAMADA